सुदिप र अञ्जनको तीज गीत ‘सारी माथी सार’ सार्वजनिक, भिडियोसहित — Sanchar Kendra
सुदिप र अञ्जनको तीज गीत ‘सारी माथी सार’ सार्वजनिक, भिडियोसहित
काठमाडाैं । साउन लागेसँगै एकपछि अर्को तीजगीतहरु बजारमा आउन थालेका छन् । शुक्रबार मात्रै सुदिप पनेरु र अञ्जन पनेरुको ‘सारी माथी सार’ बोलको तीज गीत सार्वजनिक भएको छ ।
गोर्खा चौतारी म्युजिक प्रालिको प्रस्तुतिमार्फत ल्याइएको उक्त तीज गीतमा चर्चित गायिका शान्ति श्री परियार, सुदिप पनेरु र अञ्जन पनेरुले स्वर दिएका छन् । उक्त तीज गीतको शब्द संगीत समेत सुदिप र अञ्जनकै रहेको छ ।
शुक्रबार गोर्खा चौतारी म्युजिक प्रालिको युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त गीतका एरेन्जेर बिनोद बाजुराली रहेका छन् । गीतले अहिलेका विवाहित युवा युवतीको मनोदशा चित्रण गरेको छ ।
पछिल्लो समय तीजगीतको बहानामा अनेक छाडा शब्दहरु प्रयोग गर्ने चलन समेत बढिरहेका बेला सुदिप र अञ्जन भने मौलिक गीत गीत पस्किने कोसिस गरेको गीतमार्फत प्रष्ट हुन्छ । हेर्नुहोस भिडियो ।
अभिनेत्री दीपिकाको घरबाहिर तीन घण्टा किन उभिए नील नितिन?
शाहरूख र सलमान खानबीच किन भयो ल’फडा, झ’गडाको कारण के थियो ?
इरफान खानका छोराले फिल्म खेल्न कलेज छोडे